हेर्न नछुट्याउने एउटा पर्यटकिय स्थल ‘पुरन्धारा छहरा’ « Chhahara Online
हेर्न नछुट्याउने एउटा पर्यटकिय स्थल ‘पुरन्धारा छहरा’
झुपु क्षेत्री बबई - ३ आश्विन २०७७, शनिबार
वरपर जंगल, नजिकै बबई नदी, चराचुरुङ्गीका चिरबिर आवाज त्यसैमा मनोरम दृश्य सहितको झरना । झरनाको आकर्षक दृश्य र त्यसको आवजले जो कोहीको पनि मन लोभ्याउँछ । प्राकृतिक दृष्टिकोणले भरिपूर्ण पुरन्धारा झरना दाङको एक पर्यटकिय स्थल हो ।
यो झरना बबई गाउँपालिको केन्द्र हापुरेदेखि ६ किलोमीटर नजिकमा रहेको छ । बबई गाउँपालिका वडा नं. ५ मा पर्ने पुरन्धारा झरना पछिल्लो समय पर्यटकको रोजाईमा पर्ने पर्यटकिय स्थल हो । पुरन्धारा झरना० पर्यटकहरुका लागि आकर्षक स्थलको रुपमा परिणत हुँदै गएको छ । करीब करिब ५० मिटर अग्लो झरनाको मनोरम दृश्य र भीर मौरी हेर्नका लागि पर्यटक यहाँ पुग्ने गरेका छन् ।
झरनाबाट झरेको पानीको फोहोराले पर्यटकको मन लोभ्याउने गरेको छ । दैनिक ४ ५ सय जना समूह झरना भएको स्थलमा रमाइलो गर्न पुग्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । खोल्सीको पानी करिव ५० मिटर माथिबाट भुइँमा पछारिँदा सेतो दूध ज़स्तो देखिन्छ, भने टाढाबाट हेर्दा झरना झन आकर्षक र मनोरम लाग्छ ।
दाङ जिल्लाको तुलसीपुरदेखी करीब ३० किलोमीटर र हापुरे देखी ६ किलोमीटर रहेको करिब दुई सय ५० मिटर अग्लो ‘पुरन्धारा झरनाको सोचे झैँ प्रचार प्रसार हुन भने सकेको छैन । बबई गाउपालिका वडा नं. ५ अवस्थित उक्त झरना पर्यटकको पर्खाइमा छ । टाढाबाट हेर्दा झरना झन् आकर्षक र मनोरम लाग्छ । नजिक पुग्नेहरू झरनाको छङछङ पानीमा घन्टौँसम्म रूझ्न र झुम्न रुचाउँछन । पैदलयात्राबाट र ग्राबेल बाटोको गएका पर्यटक झरनामा पुगेपछि थकाइ बिर्सिन्छन । झरनाको मध्य भागमा घाम लाग्ने बित्तिकै आकर्षक सप्तरंगी इन्द्रेणीको दृश्य हेर्न पाइन्छ । यहाँ पुग्ने मध्ये अधिकांसले झरनामा सेतो दूधज़स्तो दृश्यावलोकन गर्न घण्टौँ सम्म बिताउने र अझै यसको प्रचार प्रसार गर्न सके बबई गाउँपालिकाको र पश्चिम दाङ कै शान हुने स्थानीय दुर्गा भडारीले बताए ।
यहाँ दाङ जिल्ला र छिमेकी जिल्लाका पर्यटकहरु आउने गरेका छन् । झरनाको संरक्षण र व्यवस्थापन केही मात्रामा भएतापनि पर्याप्त मात्रमा भएको छैन् । यस झरनाको प्रचार प्रसारमा सवैले ध्यान दिन आवश्यक छ । बढी भन्दा बढी पर्यटकहरुलाई यस स्थानमा भित्र्याउन स्थानिय तह र सरोकारवालाले विशेष ध्यान दिई गूरु योजना तयार पार्न जरुरी छ ।